श्रृंखलाले मिस वर्ल्डको उपाधि जिते नेपाललाई हुन्छ ? - Everest Dainik - News from Nepal
श्रृंखलाले मिस वर्ल्डको उपाधि जिते नेपाललाई हुन्छ ?
काठमाडौं, मंसिर १२ । मिस नेपाल २०१८ विजेता श्रृङ्खला खतिवडा चीनमा जारी मिस वर्ल्डको ३८ औँ संस्करणमा सहभागी छन्।
नेपाली चेली मिस वर्ल्डमा सहभागी भएर १२० प्रतिस्पर्धीमध्ये उत्कृष्ट ३० मा पर्न सफल भएको यो पहिलोपटक हो। उनले उपाधि जित्ने नजित्ने ८ डिसेम्बरमा हुने फाइनलमा तय हुन्छ। तर सामाजिक संजालमा भने मिस वर्ल्ड र श्रृङ्खला खतिवडा निकै चर्चाका विषय बनेका छन्।
इतिहास हेर्ने हो भने वामपन्थी विचारधारा बोक्ने नेता तथा कार्यकर्ता सुन्दरी प्रतियोगिताका विरोधी देखिन्छन्। श्रृङ्खला खतिवडा वामपन्थी विचारधारकै नेताकी छोरी भएर सुन्दरी प्रतियोगितामा गई मिस नेपालको ताज पहिरी मिस वर्ल्ड जित्ने दाउमा छिन्।
सोही विचारधाराका नेताहरुले नै उनको समर्थन गर्दै उनलाई जिताउन अपिलसमेत गरेका छन्। यस कार्यको समर्थन तथा विरोध दुवै थरीका विचारले सामाजिक सञ्जाल राँकिएको छ।
नेपालकी पहिलो मिस नेपाल (१९९४) रुवी राना मिस वर्ल्डमा श्रृङ्खला खतिवडा सहभागी हुनु र उनले विश्व सुन्दरीको ताज पहिरिनु नेपालकै लागि गर्वको विषय हुने धारणा राख्छिन्।
उनी भन्छिन्, ‘श्रृङ्खलाले विश्व सुन्दरी प्रतियोगितामा भाग लिएर विश्वसुन्दरीको ताज पहिरिनु नेपालको लागि ऐतिहासिक उपलब्धी हो। यसले छायामा रहेको नेपाललाई केही हदसम्म भए पनि मिस वर्ल्ड श्रृङ्खला खतिवडाको देश भनेर विश्वसामु चिनाउने काम गर्छ। यो सबै नेपालीहरुको लागि गर्वको विषय हो।’
गणतन्त्रात्मक राज्यमा मानिसले आफूले चाहेको गर्न स्वतन्त्र हुने भएकोले व्यक्तिगत रुपमा श्रृङ्खलाको विरोधमा आफू नरहेको बताउँदै उनले भनिन्, ‘म व्यक्तिगत रुपमा कसैको समर्थन वा विरोधमा छैन। तर यो सुन्दरी प्रतियोगिताहरुको वैचारिक रुपमा घोर विरोध नै गर्छु।
यस्ता कार्यक्रम विविधताको सम्मान नगर्ने कार्यक्रम हुन्। यसले एकथरीको शारीरिक बनावटलाई मात्र सुन्दरताको कसीमा राख्छ र अरुलाई अप्रत्यक्ष रुपमा असुन्दर घोषित गरिदिन्छ। आर्य महिलालाई मात्र यसले सुन्दर मान्छ।’
महिला स्वतन्त्रतालाई यससँग जोडे पनि यस्ता प्रतियोगिताहरुले महिलालाई स्वतन्त्र बनाएका छैनन्। महिलालाई बिकिनी लगाएर भेडाजसरी मञ्चमा लाइन लगाएर हिँडाउँदै उसका शरीरका अंग प्रत्यंगको जाँच गर्नु स्वतन्त्रता हुन नसक्ने उनको भनाई छ। अन्नपूर्ण पोस्टबाट
ट्याग्स: श्रृखंला खतिवडा